Hooyaday ayaa ku xayiran | Apg29
buug la yaab leh Stefan Hallman ee!
Waxaan ku talineynaa "My hooyaday ayaa jug" by Stefan Hallman. Waxaa markhaati u weyn oo wuxuu Ciise ku samayn karin, waayo, nin.
"Hooyaday ayaa ku xayiran" waa sida Stefan ku soo koray ee khamriga la dagaal badan, buuxi, weerar iyo Goortii Ciise ku badbaaddo isaga.
Waa buug aad u awood badan oo aan ka tagi doono qof taag daran.
From waxyaabaha ku
Jahannamo guriga, waxay bilaabeen hooyada guriga ka cararay. Waxay hoos magaalada baska qaaday inuu cabbo. Sidaasayna ahaatay aan yiri: ". Hooyo ayaa ku xayiran"
Waan necbaaday erayadaas. Waan ogaa waxa ay la micno markii Aabaha guriga yimid ... xasuusta oo ka mid ah goobaha lagu hoobtay, iyo oohin quus hooyada, markay la jiifsatay ee nersparkad geeska iyo Ahaysiinay.
Haddii Aabaha guriga yimid iyo hooyaday urin khamriga ugu yar, uu Gowracay.
Wax walba bilaabi lahaa markii aan guriga ka helay dugsiga. Markaas waxaan dareemay xaq igu saabsan hooyaday qaaday biir ah. Waxaan ku ahaa sidii xasaasi ah, waxa uu halkaas sida knarkhund ah. Haddii ay ka soo qaaday oo kaliya a kabashooyin yar xirto baan ku sameeyey, si kastaba.
Aabaha ahaa isku mid, ayuu dareensanaa wax xun si degdeg ah, iyo ugu dhakhsaha badan bilaabay inuu jahannamada mar kale.
Anigu ma dhaca gurigaaga tag, waxaan dareemay in aan si ay u ilaaliyaan hooyaday iyo saddex walaalo yar.
Haddaba bilaabay muuqaalka Ibliiska. ayay Wuxuu sacbin karin iyada feedhkii xidhan midig ee wejiga sida dhiig ka soo sanka spurted, tegey dhulka la shil ah, waxaana uu bilaabay iyada haraati.
maragga cajiib ah oo wuxuu Ciise ku samayn karaa
Waxaa waxyaabo kale la taxane wargeyska Christian guriga saaxiibkiis.
Buuggu wuxuu sidoo kale waa ku haboon sida evangelisationsbok ah.